Events – Gulled Salah
Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland ayaa maanta kusoo bandhigay shirka khamiislaha ah ee Golaha Wasiirada Puntland “Hindise Sharciyeedka Diiwaangelinta Codbixiyaha” kaas oo la diyaarinayay 6dii bilood ee lasoo dhaafay. Horay waxaa wadatashi loogala soo sameeyay Xeerkaan hay’adaha dawladda, bulshada rayidka ah iyo Ururada Siyaasadda Puntland.Guddoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre ayaa ka hor akhriyay una shaxay Golaha …
Golaha wasiirada Dawladda Puntland oo ansixiyay Hindise Sharciyeedka Diiwaangelinta Codbixiyaha. Read More »
Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre iyo xubno ka mid ah Guddiga, ayaa maanta la shiray Ururada Siyaasadda Puntland. Guddigu wuxuu uga warbixiyay Ururada shaqooyinkii u qabsoomay 3-dii bilood ee udanbeeyay iyo qorshayaasha soo aaddan bilaha soo socda oo uu ugu horeeyo barnaamijka diiwaangalinta codbixiyayaasha oo dhawaan bilaamanaya. Sidoo kale xubnaha Ururada uga …
Kulanka Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland iyo Ururada Siyaasadda Puntland. Read More »
Waxaa saaka shir xarunta TPEC ku yeeshay Guddiga iyo hay’adaha kala ah Diakonia, PUNSAA, WAWA, SFS, TIDES iyo PYAN. Kulanka oo ujeedkiisu ahaa sidii la iskaga kaashan lahaa wacyigelinta bulshada ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland. Hay’adahaan iyo TPEC waxay si gaar iskaga kaashandoonaan wacyigelinta dadweynaha ku nool 12 dagmo oo …
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyin iyo xubno Guddiga ka mid ah ayaa kulan la yeeshay hay’adaha kala ah Diakonia, PUNSAA, WAWA, SFS, TIDES iyo PYAN. Read More »
Saaka Gudoomiyaha Guddigu doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre, ayaa wuxay saaka fureen qandaraaskii horay loo xayaysiiyay ee ku saabsanaa qalabka iyo system ka diiwaangalinta codbixiyaha. Waxaa soo codsaday 4 shirkadood iyagoo saakana kasoo qaybgalay kulanka furitaanka qandaraaska.Waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay kulanka hay’adda PUNSAA iyo Safaaradda Denmark oo goobjoogayaal ka ahaa iyo Hay’adaha InterPeace iyo …
Guddiga doorashooyinka ayaa furay qandaraaskii horay loo xayaysiiyay ee ku saabsanaa qalabka iyo system ka diiwaangalinta codbixiyaha. Read More »
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyin iyo xubno la socda ayaa kulan la qaatay aqoonyahanada, iyo qayb ka mid ah ardayda Jaamacada Ummadda faraceeda Puntland.
Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre iyo xubno Guddiga ka mid ah, ayaa la kulmay aqoonyahanada, dhalinyarada iyo qayb ka mid ah ardayda Jaamacada Ummadda faraceeda Puntland. Guddiga waxay ardayda kalahadleen muhiimada ay leedahay nidaamka axsaabta badan iyo kaalinta ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada. Kulamada Guddigu ay ka wadaan Baran iyo guud ahaan …
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyin iyo xubno la socda ayaa kulan la qaatay aqoonyahanada, iyo qayb ka mid ah ardayda Jaamacada Ummadda faraceeda Puntland. Read More »
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyin iyo xubno la socda, ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Sanaag, kan degmada Baran iyo saraakiil ciidan.
Gudoomiyaha Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre iyo xubno Guddiga ka mid ah, ayaa caawa, 26 September 2020, kulan la qaatay maamulka Gobalka Sanaag, maamulka Degmada Baran iyo saraakiisha ciidanka ee Gobalka Sanaag. Ujeedka kulanka ayaa ku saabsanaa wacyigalinta hannaanka geeddisocodka dimuqraadiyadda Puntland iyo siday bulshada ku nool Baran iyo guud ahaan …
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyin iyo xubno la socda, ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Sanaag, kan degmada Baran iyo saraakiil ciidan. Read More »
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyin iyo xubno la socda oo booqasho ugu tagay Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan.
Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland iyo xubno ka mid ah Guddiga oo safar shaqo ku jooga Degmada Baran ayaa galabta 26 September 2020 hoygiisa salaan booqasho ah ugu tagay Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan oo kamida hoggaanka dhaqanka Puntland. Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre ayaa Suldaanka uga warbixiyay ujeedka safarka ay ku yimaadeen Degmada Baran ee …
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyin iyo xubno la socda oo booqasho ugu tagay Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan. Read More »
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la yeeshay xubno ka socda Ururada Haweenka magaaladda Qardho.
Gudoomiyaha Gudigga KMG Doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre iyo xubno ka mid ah TPEC, ayaa maanta oo khamiis ah, 24-09-2020, waxay kulan la yeesheen Ururada Haweenka magaaladda Qardho. Kulankan oo ka mid ahaa kulamo ay Guddigu la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Qardho ayay uga hadleen doorka ay haweenku ku leeyihiin geeddi socodka nidaamka …
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la yeeshay xubno ka socda Ururada Haweenka magaaladda Qardho. Read More »
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la yeeshay ardayda Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Qardho.
Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre iyo xubno TPEC ka mid ah, ayaa xalay kulan wacyigalin ah la yeeshay ardayda Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Qardho iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada magaaladda Qardho. Kulanka ayaa waxa looga hadlayay doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin sare uqaadista wacyigalinta iyo fahamsiinta bulshada nidaamka asxaabta badan ee …
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la yeeshay ardayda Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Qardho. Read More »
Guddigadoorashooyinka ayaa kulan la yeeshay xubno ka socda ururada bulshada rayidka ah ee Qardho.
Gudoomiyaha Guddiga KMG doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre iyo xubno ka mida ah TPEC, ayaa galabta kulan la yeeshay xubno ka socda ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Qardho. Intuu kulanku socday Gudoomiyuhu waxa uu bulshada rayidka ah usharaxey doorka muhiimka ah ee ay kuleeyihiin geeddi socodka nidaamka Axsaabta badan ee Puntland, sidoo kale waxa …
Guddigadoorashooyinka ayaa kulan la yeeshay xubno ka socda ururada bulshada rayidka ah ee Qardho. Read More »
Copyright © 2021 Gulled Salah | Powered by Shaac Company